नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): नयाँ लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, के के तान्त्रिक हाम्रो नेपालमा : हप्तामा ४० घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा मंगलबार देखि हप्ताको ६९ घण्टा लोडसेडिङ हुने, एक दिन १० घण्टा लोडसेडिङ हुने !
नयाँ लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, के के तान्त्रिक हाम्रो नेपालमा : हप्तामा ४० घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा मंगलबार देखि हप्ताको ६९ घण्टा लोडसेडिङ हुने, एक दिन १० घण्टा लोडसेडिङ हुने !
मंगलबारदेखि हप्तामा ६९ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएको छ । मंसिर १९ गतेदेखि हप्तामा ४० घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा मंगलबारदेखि भने हप्ताको ६९ घण्टा लोडसेडिङ हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आइतबार निकालेको नयाँ तालिका अनुसार हप्तामा दैनिक २ पटकका दरले ४ दिन ११ घण्टा, एक दिन १० घण्टा र एक दिन ९ घण्टा लोडसेडिङ हुने छ । हप्तामा एक दिन भने एकै पटक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुने छ । प्राधिकरणले पहिले जस्तै नदीहरुमा पानीको बहाव घटेको र विद्युत् उत्पादन कम भएको भन्दै लोडसेडिङको समय बढाउनु परेको जनाएको छ । ४० देखि ५० प्रतिशत विद्युत चुहावट हुने ठाउँमा तालिका भन्दा २ घण्टा बढी र ५० प्रतिशत भन्दा बढी चुहावट हुने फिडरमा दैनिक ३ घण्टा भन्दा धेरै लोडसेडिङ गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।